Vato kolontsaina, Vato voajanahary, Vato amin'ny rindrina - LONGSHAN
1. Mora ny mametraka azy, ary miaraka amin'ny vidiny mora. Ity loko mainty mamirapiratra amin'ny kolontsaina vato ity dia mifanentana amin'ny loko hafa. Ataovy feno miaraka amin'ity vato voajanahary mahavariana ity ny volanao. 2. ...
Ho an'ity vokatra ity dia antsoinay ihany koa hoe tontonana fotsy misy lanezy, ny endriny dia toy ny oram-panala, raha ny tontonana eo ambanin'ny tara-masoandro dia misy teboka manjelanjelatra eny amboniny, toa tsara tarehy be izy. Ity fisarahana miavaka ity fi ...
Ity dia iray amin'ireo vokatra malaza indrindra eo amin'ny tsenambato vato, manondrana an-tsokosoko an'izao tontolo izao ity vokatra ity mandritra ny taona maro. Ny tonony volondavenona malefaka dia ampiarahan'ny fahasamihafana voajanahary sy ny fividianana vato. U ...
Ity takelaka birao voajanahary voajanahary ity dia misy volontsôkôlà lalina, volondavenona ary fambara ny harafesina. Ny cam dia manome loko, famaranana, firafitra ary fomba isan-karazany ary koa mandrindra ireo zoro mba hahafahanao ...
Ity vokatra ity dia misy loko maro loko, toa tsara tarehy izy io ary ny etany amboniny dia mbola mitazona ny vatosoa sy loko miloko voajanahary tsy manam-paharoa aorian'ny famokarana, fanapahana ary fifamatorana. Safidy tena safidy ho an'ny d ...
Izy io no vokatra malaza indrindra eo amin'ny tsenan'ny vato, mbola mitazona ny endrika vato voajanahary tokana sy ny loko ny habakabaka aorian'ny famokarana, fanapahana ary fifamatorana. Ny tontonana iray manontolo dia namboarin'i t ...
1. 4 strips io, ny halavany dia 40cm.interlock 5cm .Ny endrika mahazatra dia Z sy S .Ny hateviny dia 8-15MM, maivana ny hazavana, noho izany dia mora kokoa ny mitondra sy ny fananganana. 2. Ny pane iray manontolo ...
1. Vato vita amin'ny rindrina manify vato dia vato lava voaravaka lamina. Izy ireo dia mifatotra tsara kokoa ampiasaina amin'ny lamba firakotra ivelany sy ny firafitry. Ny karazana tile dia misy mifangaro ...
Ny tranga momba ny vokatra
Longshan vato dia natsangana tamin'ny taona 1988, miaraka amin'ny renivola voasoratra anarana 10millon yuan. Niorina tao Yixian, Baoding City, Hebei any Shina. Mba hahatonga an'i longshan ho orinasa maoderina miaraka amin'ny fanodinana, famokarana, fivarotana ary fanompoana…